မာတိကာ လုပ်ဖို့ ကူညီကြမယ် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
မာတိကာ လုပ်ဖို့ ကူညီကြမယ်
26-02-2010, 10:40 AM
ဆော့ဝဲလ်တွေ တော်တော်များများပြန့်ကျဲနေပါတယ်.......။ Recovery Software များကို တစ်စုတစ်စည်းထဲ လုပ်ဖို့ ညီလေးမျိုးမင်းဇော်က စိတ်ကူးရတဲ့ အတွက် အခုလိုလုပ်လိုက်တာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်........။ တခြား Recovery ဆော့ဝဲလ်လို တခြားဆော့ဝဲလ်တူရာများကိုလည်း ဒီလို မာတိကာလေး လုပ်ပြီး စုစုသွားမယ်ဆိုရင်... နောက်လူတွေအနေဖြင့် ရှာရတာလဲ သက်သာသွားမယ်...။ ဖတ်ရတဲ့သူတွေလဲ အဆင်ပြေသွားပါမယ်....။
ဘယ်လိုဆော့ဝဲလ်မျိုးတွေကို ... မာတိကာသဘောမျိုးလုပ်ချင်သလဲ ဆိုတာ... ညီလေးမျိုးမင်းဇော်ရေ.... ညီလေး .. စိတ်ကူးရရင်လဲပြောပါ...။
အောက်ပါအသင်းဝင် 14 ဦးတို့မှ Ye Aung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဒဿဂီရိ, ယွန်းယွန်း, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, မောင်သံသရာ, ဖြိုးယံလေး, bonge, Lwin Thu, maJunior, moe gyi, phoetharlay, thureinsoe, tu tu, yawnathan, zo
ပြန်စာ - Recovery Software များအလွယ်တကူရှာရန်
ညီလေးမြင်မိသလောက်တော့ Antivirus နဲ့ System Repair Tools(Tune Up၊ Diskeeper နဲ့ Registry Repair Tools ) တွေကို သူ့ Versions အလိုက် မာတိကာလုပ်ပေးစေချင်တယ်ဗျ။ အစ်ကို ခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင် ညီလေး လုပ်လိုက်ပါ့မယ်။အသစ်တင်တာရှိလည်း မာတိကာမှာ ထပ်ပေါင်းသွားလိုက်ရင် နောက်ပိုင်းဆို အချိန်တိုအတွင်းမှာ လိုတဲ့ Software ကိုရွေးယူလို့ရတာပေါ့။
နောက်တစ်ခုက Portable များစုဝေးရာ နဲ့ Converter များစုဝေးရာ တို့ကို မာတိကာတပ်ပြီး ညွှန်းနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။
လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ရပါတယ်။အစ်မတူးတူးက ပို့စ်(၁)တိုင်းမှာ မာတိကာပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးလိုက်၊ ညီလေး အပါအဝင် ကျန်တဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေက စာမျက်နှာ ဘယ်ကနေဘယ်အထိတာဝန်ယူပြီး ပို့စ်တင်လို့ရတဲ့အဆင့်ထိ လုပ်ပေးပြီး အစ်မတူးတူးဆီ ပို့ပေးလိုက်ပေါ့။(ဘေးကလူတွေပါဆွဲထည့်နေပြီ )
နောက်ပြီး ....ကြာလာတာနဲ့အမျှ များလာမယ့် အောက်ကကောင်လေးတွေလည်း မာတိကာ လုပ်စေချင်တာပဲ .(ဖြစ်စေချင်တာက များနေပြီ )
Winzip, Winrar & other archivers
Uninstaller Software collection
ကျန်တဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေလည်း ဝိုင်းပြီးစဉ်းစားပေးကြပါဦးဗျနော်
Last edited by Myo Min Zaw; 26-02-2010 at 03:20 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 21 ဦးတို့မှ Myo Min Zaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စမောလေး, ဒဿဂီရိ, ဖယောင်း, ယွန်းယွန်း, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, ဖြိုးယံလေး, နှင်း, alwslov, bonge, lan kyout, Lwin Thu, maJunior, moe gyi, nyinyi mt, specialspecial, thureinsoe, tu tu, yawnathan, zo
26-02-2010, 03:44 PM
Originally Posted by Myo Min Zaw
အစ်မတူးတူးက ပို့စ်(၁)တိုင်းမှာ မာတိကာပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးလိုက်၊ ညီလေး အပါအဝင် ကျန်တဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေက စာမျက်နှာ ဘယ်ကနေဘယ်အထိတာဝန်ယူပြီး ပို့စ်တင်လို့ရတဲ့အဆင့်ထိ လုပ်ပေးပြီး အစ်မတူးတူးဆီ ပို့ပေးလိုက်ပေါ့။(ဘေးကလူတွေပါဆွဲထည့်နေပြီ )
သိပ်ရတာပေါ့။ အဲလို ပို့ပေးလို့ကတော့ အကုန် “မာတိကာ” လိုက်တပ်ပစ်မယ်။
Antivirus တွေက ဒီမှာ တော်တော်များများ လင့်ခ်ညွှန်းထားပြီးသားပါ။
အမျိုးအစားတစ်ခုတည်းမှာ version ကွဲနေတာမျိုးတွေကိုတော့ မလုပ်လည်းရပါတယ်။
လိုချင်တဲ့ version ကို topic တစ်ခုထဲမှာ ရှာရတာဆိုတော့ ရှာလို့လွယ်မှာပါ။
(လုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ တခြားဟာတွေ ဦးစားပေး လုပ်ဖို့ပါ။)
topic တစ်ခုထဲမှာ အမျိုးအစားမတူတဲ့ software တွေ ပေါင်းနေတာမျိုးကို ဦးစားပေး လုပ်သင့်ပါတယ်။ ( ဥပမာ။ ။Portable များစုဝေးရာ, Converter များစုဝေးရာ , Burning Tools , Player Collection etc.,)
လုပ်ပေးကြမယ်ဆိုရင် အခု မျိုးမင်းဇော် လုပ်ထားသလိုပဲ software အမည်တွေကို A-Z အက္ခရာစဉ်ပေးပါ။ အဲဒီစဉ်ထားတဲ့ အမှတ်စဉ်အတိုင်း လင့်ခ်တွေကို သပ်သပ်စဉ်ပေးပါ။
အပေါ်မှာပြောတာတွေအပြင် တခြားဟာတွေ ကိုယ်စိတ်ကူးရသလို လုပ်ပေးချင်တယ်ဆိုလည်း ရပါတယ်။
မာတိကာ အားလုံးရဲ့အချုပ်ကို ဒီမှာ နောက်မှ အစီအစဉ်တကျလေး ပြန်လုပ်ပေးပါမယ်။
အောက်ပါအသင်းဝင် 20 ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဒဿဂီရိ, ဖယောင်း, ဝင်းအောင်, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, ဖြိုးယံလေး, နိုးတူး, Aung Aung, bonge, Lwin Thu, moe gyi, Myo Min Zaw, nyinyi mt, phoetharlay, smlat88, specialspecial, thurein, yawnathan, zo
သိပ်ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်တွေပေါ့ဗျာ အပေါ်မှာ ပြောသွားကြတဲ့ အတိုင်း အဆင်ပြေရာ ခေါင်းစဉ်လေးတွေ ခွဲပြီး တစ်ခု တတ်နိုင်တဲ့ သူက တစ်ခု၊ နှစ်ခု တတ်နိုင်တဲ့ သူက နှစ်ခု၊ အားလုံး ၀ိုင်းပြီး လုပ်ကြမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေမှာပါ။ full version free software လေးတွေ လိုချင်ရင် မြန်မာမိသားစုမှာ အကုန်ရှိတယ် ဖြစ်လာမယ်။ software များဗျာ စက်ထဲမှာ တောင် ထားစရာ မလိုဘူး။ အင်တာနက် မှာ ရိုက်ရှာ latest ကို ရွေးသုံးယုံပဲ။ ဟုတ်ကဲ့ အင်တာနက်လိုင်း ကောင်းတဲ့သူတွေ အဖို့တော့ ဟုတ်တာပေါ့ဗျာနော်။ ကျနော်တို့ ဆီက အင်တာနက်ကို အချိန်ပိုင်းနဲ့ ပိုက်ဆံ ပေးပြီး သုံးနေရတဲ့ ညီငယ်၊ ညီမငယ်တွေ အတွက် စဉ်းစားမိတာပါ။ အင်တာနက်ကလဲ မကောင်း။ software တစ်ခု ကို ဒေါင်းရင် ဖိုင်ဆိုဒ်ကို ကြည့်ရပြီ။ full version လေးဖြစ်ကောင်းပါရဲ့ ဆိုပြီး အံကြိတ်ပြီး အချိန်ကြာကြာ ဒေါင်းလိုက်တယ်။ ရလာတော့ full version မဟုတ်ဘူးဆိုရင် အဆင်မပြေပြန်ဘူး။ အင်တာနက်လိုင်းကောင်းပေမယ့်လည်း တစ်ချို့ နေရာတွေ Limit လိုင်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒေါင်းသလောက် ပိုက်ပိုက် က ပြောင်ပြောင် သွားတာ၊ နောက်ပြီး အရမ်းကောင်းတဲ့ သူတွေ ရော လိုချင်တဲ့ soft တစ်နေရာတည်းမှာ ရှိနေတော့ အချိန်ကုန်သက်သာပြီး အဆင်ပြေပြီပေါ့ဗျာ။ မြန်မာမှာတော့ software တွေက ၀ယ်သုံးနေကြရတယ်။ ကျနော်တို့ ဆီက အချိန်ပိုင်းနဲ့ အင်တာနက်သုံးနေတဲ့ software တွေကို ခုမှစတင်လေ့လာနေတဲ့ သူတွေအတွက် အလွန်ဝမ်းမြောက်ဖွယ် ပါပဲ
ကျနော်လဲ စဉ်းစားထားပါတယ်။ တကယ်လုပ်ဖြစ်ပြီး တကယ်တင်ပေးမှ ပဲ ပြောမယ်လို့ စိတ်ကူးထားမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ယောက်အားနဲ့ မပြီး ကျန်တဲ့သူတွေလဲ တတ်နိုင်တဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေမှာ ပါဝင်စေချင်ပါတယ်။ ကျနော် မာတိကာ နဲ့ စုစည်းပြီး တင်ပေးသွားမယ့် ခေါင်းစဉ်တွေကတော့
၁။ Editing software များ စုဝေးရာ
၂။ photo နှင့်သက်ဆိုင်သော software များ ( photoshop, photo frame, etc ..... )
ကျနော် အကြံပြုချင်တာကတော့ မာတိကာထဲမှာ Portable တွေပါ တခါတည်း ထည့်သွားစေချင်တယ်။ ဥပမာ -
Adobe Premiere 2.0 ( Full Version )
Adobe Premiere 2.0 ( Portable )
နောက်ပြီး သေနေတဲ့ လင့်တွေ မညွန်းမိအောင်တော့ သတိထားစေချင်ပါတယ်။ ဟုတ်ပီ အပြောကတော့ လွယ်တာပေါ့ အလုပ်ခက်တယ် လို့ ပြောချင်လား ကျနော်လဲ ကျောင်းသားပါပဲ ဗျာ။ ကျောင်းသားဆိုတော့ ... လုပ်ချင်စိတ် ရှိရင် အထမြောက်ပါပြီ။ software တွေတော့ နက်မကောင်းလို့ မတင်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် ebooks တွေပေါ့။ မာတိကာ တပ်ပေးနိုင်ရင် မဆိုးဘူး။ ပြောကြည့်ပါမယ်။
- Programming နှင့် ဆိုင်သော ebooks
- networks နှင့် ဆိုင်သော ...
- Linux နှင့်ဆိုင်သော
ဒါကတော့ ကူညီချင်စိတ်တော့ ရှိတယ် အင်တာနက် မကောင်းဘူးဆိုသူတွေ လုပ်နိုင်ဖို့ တင်ပြတာပါ ဒီ အစီစဉ်က အင်တာနက်ကောင်းသူတွေ အလေးမထားလိုပေမယ့် အင်တာနက် မကောင်းသေးတဲ့ ကျနော်တို့ ဆီက ညီငယ်၊ ညီမငယ်များအတွက် အလေးထား၊ အားထားစရာ ဖြစ်လာပါမယ်။ အပေါ်မှာ ပြောသွားကြတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေအပြင် မာတိကာ ၀ိုင်းပြီး လုပ်စေချင်သလို software တွေပါ တင်ပေးစေချင်တာကတော့ ->
1. Programming Software များ
2. Dictionary Software များ
3. Window and Linux Os များ
ဘယ်သူမှတော့ အားလို့ ရယ်တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ မအားတဲ့ ကြားထဲကပဲ အချိန်လေးတစ်ခု ပေးလိုက်တာက တစ်ဖက်လူအတွက် အများကြီး အဆင်ပြေသွားတယ်ဆိုတဲ့ ပီတိ က ဘာနဲမှ မတူပါဘူး။ ဘယ်လို မျိုးလဲ ဆိုတာ သိချင်ရင်တော့ အစ်မတူးတူး ကိုသာမေးကြည့်ကြ ပေါ့
ပီတိကို စား ၊ အားရှိ၏ တဲ့၊ ဟင်းချက် ပျင်းတဲ့ သူတွေ အတွက်သတင်းကောင်းပါ ဘယ်သူဘာ ကူညီမယ်ဆိုတာလေး စိတ်ကူးရရင် ဒီအောက်မှာ ရေးသွားကြပါ
နိုင်သလောက် ပါဝင်ကူညီကြပါစို့ ...
မိသားစုဝင်တွေ အားလုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင် အောင်မြင်ကြပါစေ ...
အောက်ပါအသင်းဝင် 20 ဦးတို့မှ bonge အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဖြိုးငြိမ်း, ကိုလေးအောင်, ချယ်ရီမင်း, ဒဿဂီရိ, ယွန်းယွန်း, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းသွေး, မောင်သံသရာ, ဖြိုးယံလေး, နှင်း, Aung Aung, Lwin Thu, moe gyi, Myo Min Zaw, phoetharlay, thurein, tu tu, yawnathan, zo
ကိုဗိုလ်ငယ်က သူ့လုပ်ပေးနိုင်မယ့် အပိုင်းလေးပြောသွားတော့ ကျနော်လည်း လုပ်ပေးနိုင်တာလေးကို ဝင်ပြောလိုက်ပါဦးမယ်
အစ်မတူးတူး ဥပမာပေးတဲ့အထဲက Burning Tools နဲ့ Player Collection ကို မာတိကာတပ်ပေးပါ့မယ်
Portable များစုဝေးရာ နဲ့ Converter များစုဝေးရာ တို့ကြတော့ တအားများနေတာနဲ့ ကျနော် အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို စာမျက်နှာခွဲပြီး ဝိုင်းလုပ်ပေးမှ ရမယ်ဗျ..လုပ်ပေးချင်တဲ့သူက ဘယ်စာမျက်နှာကနေ ဘယ်စာမျက်မှာထိလုပ်မယ်ဆိုတာ ဒီအောက်မှ ရေးပေးခဲ့ကြပါ..ကျနော် တာဝန်ယူထားတဲ့နှစ်ခုပြီးလို့ တခြားနေရာတွေမှာလည်း ဆွေးနွေးပေစရာမရှိရင် ဝင်ကူပါ့မယ်..
နောက်လူတွေ အဆင်ပြေဖို့အရေး ကျနော်တို့တတွေ ဝိုင်းကူကြပါစို့လားဗျာ
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ Myo Min Zaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, ဇင်မောင်မောင်ချစ်, ဒဿဂီရိ, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဇော်ရဲပိုင်, နေမင်းသွေး, ဖြိုးယံလေး, bonge, phoetharlay, thurein, tu tu, yawnathan, zo
ကျွန်တော် Converter များစုဝေးရာ ဆိုတာမှာစာမျက်နှာ နှစ်မျက်နှာ အစမ်းလေးလုပ်ပေးမယ် အကုန်မလုပ်တာက သိပ်နားမလည်သေးလို အမှားများသွားရင်ရှာတဲ့သူ ပိုတောင်ရွာလည်သွားမှာစိုးလို့ပါ အဆင်ပြေရင်တော့ မိသားစုလေးမှာဆက်လုပ်ပေးပါမယ်ဗျာ ခုမှလည်းစလေ့လာနေတာလည်းဖြစ်တယ် ဒါမျိုးလည်းစိတ်တောင်မကူဖူးတော့မှားသွားရင်မကောင်းလို့ပါ လူအများဖတ်နေတဲ့နေရာမှာ ကျွန်တော်အမှားကအကြီတန်သွာရင် ကျွန်တော်လည်းမကောင်းဘူး မိသားစုလည်းမကောင်းဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ပါ
အောက်ပါအသင်းဝင် 15 ဦးတို့မှ phoetharlay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဖြိုးငြိမ်း, ကိုလေးအောင်, စမောလေး, ဒဿဂီရိ, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, ဖြိုးယံလေး, bonge, Myo Min Zaw, thurein, tu tu, yawnathan, Ye Aung, zo
ပို့စ် 322 ခုအတွက် 1,473 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အင်း ညနေကမှ မtu tu ရေးထားတဲ့ ပို့စ် ၅ ကိုဖတ်မိတာပါ။ အဲ့တော့ ကျွန်တော်လည်း ကဏ္ဍတစ်ခုခုကနေ ကူညီဖို့ စိတ်ကူးမိပါတယ်။ ခက်တာက ကျွန်တော်ကစိတ်သာ ရှိပြီး နက်ကတော်တော်ဆိုးတော့ လင့်ခ်သေနေတာတွေဆို ကိုယ်မှာရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ပြန်ရှာပြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကပြန်တင်ပေးဖို့ကျတော့ ဆိုဒ်အရမ်းများနေရင် ခက်နေရော။ အဲ့တော့ ကျွန်တော့အနေနဲ့ အားလုံးကို စုစုစည်းစည်း ဖြစ်အောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ လင့်ခ်သေနေတာတွေကိုတော့ မတူတူ ဆီပဲ PM ပို့ပြီးအဲ့လင့်ခ်ကို ပြင်ခိုင်းလိုက်တော့မယ်လေ ။ ကျွန်တော်က Uninstaller Collection လေးကို လုပ်ပေးပါမယ်။ အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် ထပ်ပြီး လုပ်ပေးတာပေါ့ ။
[CENTER][COLOR="Magenta"][B][I][FONT="Book Antiqua"][SIZE="4"]4 Ever Man-U[/SIZE][/FONT][/I][/B][/COLOR][/CENTER]
အောက်ပါအသင်းဝင် 14 ဦးတို့မှ thurein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဖြိုးငြိမ်း, ကိုလေးအောင်, ဒဿဂီရိ, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, ဖြိုးယံလေး, bonge, Myo Min Zaw, phoetharlay, tu tu, yawnathan, Ye Aung, zo
Find More Posts by thurein
Uninstaller Software များ၏ မာတိကာ ကိုတော့ ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာ ပြီးသွားပါပြီ။ ကျွန်တော်က Topic အသစ်ဖွင့်လိုက်မိတယ် ။ ဒီ Topic ရဲ့ ခေါင်းစဉ်က Recovery Software များအလွယ်တကူရှာရန် ဆိုတော့ ဒီတော့ပစ်မှာပဲ ပေါင်းထားလိုက်ရင် တစ်ချို့မသိတဲ့သူတွေ (အမြဲမဝင်ဖြစ်တဲ့သူတွေ)ကျတော့ Recovery Software မလိုရင် ဒီတော့ပစ်ကို ကြည့်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ မတူးတူးပြောသလို ပြီးရင် အားလုံးကို ဒီပို့စ်မှာ စုစည်းဖေါ်ပြမယ် ဆိုပေမဲ့ လောလောဆယ် မပြီးသေးခင် အဆင်ပြေအောင်လို့ပါ။ နောက်ပြီး လူဆိုတာကလည်း စည်းကမ်းတွေ စည်းမျဉ်းတွေဆို ဖတ်ရတာ ခပ်ပျင်းပျင်း မဟုတ်လားဗျ။ အဲ့ဒါကြောင့် ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာက မာတိကာတွေချည်းပဲ သပ်သပ်လုပ်ပြီးမှ ဆော့ဝဲလ်များ၏မာတိကာ ပေါင်းချုပ်ဆိုပြီး တော့ပစ်တစ်ခုနဲ့ထားတာ ပိုအဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ကို အကြံပေးကြည့်တာပါ။ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် ဘာပဲလိုလို ရန်ကုန်လမ်းညွှန်ထဲမှာရှိတယ် အဲဟုတ်ပေါင် မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်မှာ ရတယ်ဆိုရအောင် ကျွန်တော်တို့ ဝိုင်းပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတာပေါ့။ နောက်နေ့မှာ ကျွန်တော် Downloader ကဏ္ဍကို ကူညီပြုလုပ်ပေးပါမယ်။
PS.... ကျွန်တော်ပြုလုပ်ပြီးသော topic ကနဲတဲ့အတွက် အဆင်မပြေသော လင့်ခ်ကလည်း သိပ်မရှိပါဘူး။ အဲ့ဒါလေးတွေကို ပြန်တင်ပေးထားချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ရှိတဲ့မောင်နှမများကပဲ ဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေတဲ့ မောင်နှမများက တင်ပေးပါဦး။ မတူးတူးခမျာလည်း တစ်ခြားအလုပ်ရှိဦးမှာမို့ သူ့ကို PM မပို့တော့ပါဘူး။ အဆင်မပြေတဲ့ လင့်ခ်လေးတွေက
Advanced Uninstaller PRO 2006 7.52
Final Uninstaller v1.7.7
Your Uninstaller Pro 6.1.1231
WindowCare Uninstall Gold
အောက်ပါအသင်းဝင် 13 ဦးတို့မှ thurein အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, ဒဿဂီရိ, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, ဖြိုးယံလေး, bonge, moe gyi, Myo Min Zaw, phoetharlay, tu tu, Ye Aung, zo
ပြန်စာ - မာတိကာ လုပ်ဖို့ ကူညီကြမယ်
ကျွန်တော် Converter များစုဝေးရာ ဆိုတာမှာစာမျက်နှာ နှစ်မျက်နှာ လုပ်ထားပြီးပါပြီ ( ဟဲဟဲ တကယ်တော့ အကိုကြီး ကိုမျိုးမင်းဇော်လုပ်ပေးတာပါ ) အမ တူတူလည်းကူထားတာပေါ့ဗျာ ကျွန်တော်နောက်ထပ် Converter များစုဝေးရာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာပဲ သုံးမျက်နှာထပ်လုပ်ပေးပါမယ် ကျန်နေသေးပါတယ် နှစ်မျက်နှာကတော့ ဟဲဟဲ အဲဒါလေးကတော့ အဆင်ပြေတဲ့သူပေါ့ဗျာ တကယ်လိုမပြေကြသေးဘူးဆိုလည်း...တားတားလည်း အဆင်ပြေရင်ဆက်လုပ်ပေးမယ်လေ...အဆင်ပြေတဲ့နောက်အပတ်ပေါ့ဂျာ...
အကို အမ များလုပ်ပေးလိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်....
နောက်အပတ်မဟုတ်တော့ပါဘူးဗျာ အကုန်လုံးကို ခုလုပ်ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာ...အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာ့တာဂျာ...
ဒိလင့်လေးမှာ ပါခင်ဗျာ...Convector များစုဝေးရာဆိုတာလေးပါ ခင်ဗျာ..
Last edited by phoetharlay; 07-03-2010 at 11:41 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 12 ဦးတို့မှ phoetharlay အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုဖြိုးငြိမ်း, ကိုလေးအောင်, ဒဿဂီရိ, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, မောင်သံသရာ, ဖြိုးယံလေး, bonge, Myo Min Zaw, thurein, tu tu, Ye Aung, zo
ကျွန်တော်ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ Portable ကဏ္ဍထဲကိုဝင်ကြည့်ပြီး လင့်ခ်တွေကြည့်လိုက်တော့ တော်တော်များများက သေနေတာတွေ့ရပါတယ်။ အစအဆုံး ၁၉ မျက်နှာမှာ ပို့စ် ၅၆၀ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီး အလုပ်လုပ်တဲ့လင့်ခ်က ၁၂၉ ခုပဲ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ ကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ ၁၂၉ ပို့စ်ကို ကျောင်းအားတဲ့အခါ ကူပေးပါမယ်။ တကယ်လို့ မာတိကာ မလုပ်ခင် သေနေတဲ့လင့်ခ်တွေကို ပြန်ပြင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တွေ့တဲ့ လင့်ခ်နံပါတ်တွေ ရေးပေးပါမယ်။
4 ,7, 8 , 11 , 13 , 14 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 24 , 26 , 27 , 27 , 28 , 29 , 33 , 35 ..... 51 , 55 , 57 ..... 59 , 77, 78 , 80 , 87 , 88 , 89 , 92 , 93 , 98 , 99 , 100 ..... 104 , 107 ..... 117 , 119 ..... 123, 127 , 130 , 134 , 145 , 152 ..... 156 , 163 , 170 , 171 , 177 , 178 , 180 , 186 ..... 189 , 190 , 192 , 195 , 196 , 203 ..... 206 , 210 ...... 212 , 215 , 218 , 219 , 221 ...... 224 , 227 , 228 , 233 , 237 , 240 , 247 , 250 , 251 , 254 , 257 , 261 , 263 , 264 , 266 , 277 , 278 , 279 , 280 , 287 ..... 289 , 293 , 294 , 304 , 305 , 306 , 309 , 310 , 316 ..... 319 , 324 , 325 , 335 ..... 338 , 347 , 348 , 350 , 354 , 355 , 359 , 365 , 366 , 367 , 369 , 373 , 396 , 398 , 399 , 403 , 404 , 418 , 425 , 438 , 446 , 451 .
ပြန်ပြင်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်း ပြင်ပေးပြီးတဲ့အခါ ဒီကဏ္ဍမှာဖြစ်ဖြစ် Portable ကဏ္ဍမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ပို့စ်တစ်ခုနဲ့ ပြန်တင်ပေးတာ ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲ့ဒါမှာ အဲ့ကောင်လေးတွေပါ စုစည်းပြီး တစ်ခါထဲ ထည့်လိုက်လို့ရသွားတာပေါ့။ အဟီး ပြောတော့သာ လွယ်တာပါ တကယ့်လက်တွေ့လုပ်ရတာ မလွယ်ဘူးဆိုတာလည်း ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ်လေးကို ကျွန်တော်တော့ အရမ်းသဘောကျလို့ အားတက်သရောကို ကူညီပေးတာပါ။ အားလုံးပြီးသွားမှပဲ အခုလိုမျိုး တစ်စုတစ်စည်းထဲ External Hard disk ဝယ်ပြီးတော့ကို သိမ်းထားဦးမယ်။ အခုဆိုပြီးဖို့ဘာမှ မလိုတော့ပါဘူး။
ကိုဖြိုးငြိမ်း, ဒဿဂီရိ, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, ဖြိုးယံလေး, bonge, chitnyimalay, Lwin Thu, minwain, Myo Min Zaw, phoetharlay, tu tu, zo
thurein ရေ... အလုပ်လုပ်တဲ့လင့်ခ် ၁၂၉ ခုကိုပဲ အရင်လုပ်ထားပေးပါ။
သေနေတဲ့လင့်ခ်တွေ အကုန်ပြန်ပြင်ဖို့ကတော့ မလွယ်ဘူး။
ဒီကြားထဲတောင်းတဲ့သူရှိလို့ ပြန်တင်ပေးတဲ့ပို့စ်တွေရှိခဲ့ရင် thurein ရဲ့ မာတိကာမှာ ဖြည့်ပေးပါမယ်။
တစ်ယောက်ယောက်က အဆင်ပြေလို့ ပြန်တင်ပေးချင်တာရှိရင် ဘယ်ပို့စ်ကိုပြန်တင်ပေးထားပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း download လင့်ခ်နဲ့တကွ ကြီးကြပ်သူတစ်ယောက်ယောက်ထံ PM ပို့ပြီးဖြစ်စေ၊ ဒီ topic မှာဖြစ်စေ ပြောပေးပါ။
သက်ဆိုင်ရာပို့စ်မှာ လင့်ခ်ပြင်ပေးပြီး မာတိကာမှာ ဖြည့်ပေးပါမယ်။
( ကြီးကြပ်သူများ - အချိန်ရမယ်ဆိုရင် thurein ပြောထားတဲ့ လင့်ခ်သေနေတဲ့ပို့စ်တွေထဲက software version အဟောင်းများ၊ ထပ်နေတဲ့ software များ၊ အသုံးနည်းတဲ့ software များကို အမှိုက်ပုံးထဲ ပို့ပေးပါ။ )
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ tu tu အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုလေးအောင်, ဒဿဂီရိ, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, bonge, Lwin Thu, Myo Min Zaw, phoetharlay, thurein, zo
ကျွန်တော်လည်း ဒီအပိုင်းကိုစလုပ်ကတည်းက ကူညီချင်နေတာ၊ ဖြစ်ချင်တော့ ကိုမျိုးမင်းဇော် တို့စလုပ်တဲ့အချိန်က၊ အလုပ်သင်ဆင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတော့၊ ဘယ်လိုမှမအားတော့ ၀င်မကူညီနိုင်သေးလို့၊ ငြိမ်နေလိုက်ရတယ်၊ ခုလည်း အားပြီလားဆိုတော့၊ အားပါတယ် တစ်ရက် ကျောင်းအင်တာနက်ကလည်း အဆောင်မှာရတစ်ချက်၊ မရတစ်ချက် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မအားအားတဲ့အချိန်ထဲက၊ မဖြစ်ဖြစ်အောင်တော့ ကူညီချင်ပါတယ်၊ အပေါ်က ကိုဘိုငယ်ပြောထားတဲ့အထဲက နံပါတ် ၂ အချက်ဖြစ်တဲ့၊ photo နှင့်သက်ဆိုင်သော software များ ကိုမာတိကာ လုပ်ချင်ပါတယ်။ အားတဲ့အချိန်လေးလုပ်ပြီးရင် လာတင်ပေးပါမယ် ခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ ဖြိုးယံလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ယွန်းယွန်း, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, မောင်သံသရာ, bonge, Lwin Thu, Myo Min Zaw, phoetharlay, tu tu, yawnathan, zo
ပို့စ် 290 ခုအတွက် 1,335 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
နှင်းလဲ ၀င်ကူညီချင်ပါတယ် ဒါပေမယ့်
လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် ကူညီပြီးလုပ်ပေးချင်ပါတယ် အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင်သင်ပေးကြပါနော်
ဒါဟာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆုံးစီရင်ခြင်းပဲ [/B][/COLOR][/SIZE]
အောက်ပါအသင်းဝင်7ဦးတို့မှ နှင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ယွန်းယွန်း, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, မေဦးမွန်, မောင်သံသရာ, Lwin Thu, phoetharlay, zo
Find More Posts by နှင်း
14-12-2010, 05:34 PM
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ thureinsoe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဟိန်းဟိန်းမြတ်, မောင်သံသရာ, Lwin Thu, zo
၀ိုင်းကူညီချင်တယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်က ဆရာကြီး မဖြစ်သေးဘူး တပည့်ဘဲ ရှိသေးတယ် ကူညီတဲ့ အဆင့်ရောက်အောင် ကြိုးစားမယ် ပြီးရင် ၀ိုင်းလုပ်ပေးမယ်နော်
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ kyarminthar အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
pdf ဖိုင်တွင် မာတိကာ တပ်နည်း phyomyintthein Software များဆိုင်ရာ614-02-2011 09:26 PM
Uninstaller Software များ၏ မာတိကာ thurein Applications007-03-2010 02:45 AM